Mepụta Ncheta Foto, n'ụzọ nke ahaziri, site na ngwa Foto nke macOS Sierra | Esi m mac
Mepụta Ncheta Foto, n'ụzọ nke ahaziri, site na ngwa Foto nke macOS Sierra
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Mac App Store, Nkuzi, ọtụtụ
Na mbata nke MacOS Sierra, Anyị hụrụ ọrụ ọhụrụ na ngwa ahụ Foto, ji aha nke Ncheta. Ọrụ a, nke na-anọgide na ndabere, na-emepụta ọba banyere: ihe omume, ebe, oge nke afọ, yana "akwụkwọ" ahaziri iche banyere mmadụ na ogologo wdg. N'otu aka, anyị ekwesịghị ime ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na ọ bụ ngwa nke na-ewepụta ọba nke ụbọchị ndị gara aga, na-ekwu na n'otu oge ahụ ọ na-emegharị vidiyo na foto ndị a. Ma anaghị ahọrọkarị ihe anyị chọrọ, ya mere anyị ga-ahụ na nkuzi a otu esi ahọta foto na ụzọ ahaziri iche.
Na mbu, ozi anyi ga abu Mepụta ọba. N'akụkụ aka ekpe nke ngwa ahụ, anyị ga-ahụ okwu ahụ albums. Site na ịpị na ya, anyị na-enweta ọba ndị ahụ anyị mepụtara. Ugbu a ọ bụ oge iji mepụta ọba ọhụrụ. Iji mee nke a, anyị ga-pịa bọtịnụ ndị ọzọ dị na ngalaba nke ngwa ahụ. A adaala menu ga-emeghe na anyị ga-pịa album.
Nzọụkwụ nke abụọ nwere kpọọ album ọhụrụ a.
Mgbe ahụ anyị ga-ahọrọ foto site na ọba anyị. Anyị na-alaghachi na interface ebe foto niile dị, wee họrọ foto anyị chọrọ iji. Ozugbo foto ndị ahụ mejupụtara album anyị gosipụtara nke ọma, anyị ga-pịa bọtịnụ nnabata dị n’elu aka nri. Anyị arụọla album anyị. Lelee foto ndị mejupụtara ọba anyị, ọ dị mfe dịka ịpị ihe emere ma anyị ga-ahụ foto niile.
N'ikpeazụ, anyị ga-pịa ozi acha anụnụ anụnụ, gosi dika ncheta.
Oge eruola ịlaghachi na sidebar n'aka ekpe wee lelee na foto ndị dị na ọba anyị bụ akụkụ nke Memory. N'okwu ahụ, a ga-ekepụta ihe ncheta anyi, oyuo foto a hotara Na mgbakwunye, anyị nwere otu ọrụ dị, dị ka a ga - asị na ọ bụ ebe nchekwa sitere na ngwa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mepụta Ncheta Foto, n'ụzọ nke ahaziri, site na ngwa Foto nke macOS Sierra
Oxenfree, egwuregwu na-ebupụta taa na Mac App Store
JP Morgan weghaara MCX ka ya na Apple kwụọ ụgwọ